Musalsalladda iyo saamaynta ku leeyihiin qoyska Q2AAD W/Q; Nasra Abid Osman “Nasra Bakaal” | Laashin iyo Hal-abuur
1-	Dadaal la’aan dhinaca Waxbarashada
2-	Ka mid noqoshada Ardayda ugu liita fasallada
3-	Macallimiinta oo had iyo jeer bannaanka fasalka uga saaraya marka ay arkaan Carruurtii oo fasalka ku sheekeyneysa
4-	Jecleysi saa’id ah fasaxyada Iskuulka iyo Dugsi Qur’aanka
5-	U degdegid shaashadda uu ka fiirsanayo musalsalka, sida in la yiri waa waqtiga salaadda
6-	Caasi waalidiinimo
7-	Xanuunno dhinaca neerfaha mararka qaar ka asiiba
8-	Hammi la’aan dhinaca horumarka
9-	Aqlaaq darro iyo dhaqan xumo
1-	Dayicidda Xanaannada Qoyska
2-	Furriinka oo bata
3-	Dhaqaalaha qoyska oo hoos u dhaca marka loo eego telefishan oo iska daaran muddo badan
5-	Dirir joogta ah labada qof ee nolol wadaagga ah ka dhex aloosan mar walba
6-	Kalsooni darro ragga seygood ah ay ka qabaan
7-	Qiyaano iyo gogol dhaaf
8-	Ku fikirid nolol qiyaali ah liddi ku ah qoyskeeda
–	Qiyaanid lammaane
–	La falgalin ubadka, haweenka iyo qoyska diin aan Islaam ahayn, tani waa saameynta ugu weyn Musalsallada lagu arko waxaana u badan ee lagu dhax arko Musalsalladda dalalka Meksika (Mexico) iyo Hindiya
–	Faafin dhaqan aan kan Soomalida ahayn
–	Jiil dhaqammo kale ku dhiirrada, oo dhalanrog iyo uu u dhaco dhaqanguur
–	Qamriga oo la banneysto ama loo moodo ilbaxnimo iyo hormar, halka uu maandooriye iyo ka yahay dhimir dile, iska badan tihiina ayba keento cudurro halis u ah caafimaadka.
–	Dilka qof kale, oo aadan u ogayn waxa iyo sababta aad u dishay, marka laga reebo muran yar ama dood aan qiimo lahayn oo idin dhex martay.
–	Qiyaanada oo dhaqan iyo noqotay caado
–	Qoyska oo aan is adeecin, war iyo talana aan iska maqal, oo is garab yaac iyo ku nool is daba mar.
–	Waqti lumis iyo waayo badan oo la galiyo wax aan dheef iyo lahayn natiijo la taaban karo, marka laga reebo xiiso maaneed iyo khiyaalo aan muuqan.
1-	Inaad iska dhaafto gabi ahaan musalsallada, haddii aadan joojin karaynna aad yareyso fiirsashadooda, taasi oo ugu dambeyn kuu sahleysa inaad awooddo inaad iska joojiso dhammaan.
2-	Saacadaha guud ahaan taleefishinka la fiirsanayo oo la xaddido, laguna aaddin xilliyada waajibaadka ay jiraan sida salaadaha, casharro aqrisashada iyo dib u eegista waxay ubadku maanta la soo bartay.
3-	Waalidiinta soomaaliyeed waa in aanay carruurtooda u fasixin wax walba oo laga soo daayo taleefishinada, haddii aanu ahayn waxyaabo maankooda kobcinaya
4-	In haweenku aanu tusaale ugu soo qaadan raggooda jilayaasha musalsalladii ay daawadeen, maxaa yeelay, waxay idin dhaxalsiin kartaa kalsooni darro iyo isku qanacsanaan la’aan soo dadajiya kala tag qoys dhisan.
5-	Haweenku waa in ay waqtiyada ay daawadaan musalsalallada ay taa badalkeeda waqti la qaataan seygooda, caruurtooda, ama ay aqriyaan Buugaag.